Ternopil - Study muUkraine. Ukrainian Munopinda Center
Ternopil ndiye rimwe remaguta makurusa kumadokero kweUkraine, riri mumwoyo yawo uye vane mamiriro chinokosha Trade Center. Ndicho akanyarara, guta chinopa mutema ane akasiyana ezvinhu, Nhoroondo inopenya uye plethora kunonakidza rwokuzvarwa, nhoroondo uye mapurani rainzwika.
The zita Ternopil, maererano imwe ngano, zvinobva okuti “ternovoye polye” (chaizvoizvo, "Blackthorn munda"), nemhaka blackthorn miti inoshandiswa kukura pano. Imwe ngano anoti kuti guta rainzi namarudzi muvambi, Grand Crown Hetman Jan Tarnowski. Ndiye, paakaudzwa tsamba kubva mutongi Polish Sigismund ini Old achivakumbira guta hwaizogadzwa, akavaka rakavakirirwa Castle pano muzana remakore rechi16.
KuMiddle Ages, Ternopil pamharadzano inokosha dzaishandiswa pakutengeserana, pakuva muzinda zvokutengeserana. Guta rakanga chikamu hweAustria-Hungary kubva mukupera rechi18, asi pashure pakupera kweHondo Yenyika I, yakadzoka Poland. mu 1939, Ternopil akava chikamu Soviet Union, uye, kubva 1991, kuzvimirira Ukraine.
Guta racho pfungwa huru mubereko ichaongororwa kuva Old Castle, vane nhoroondo akatanga kusvika 500 makore apfuura. Ndicho mukuru asara rokuvaka mune Ternopil. Kunyange zvazvo chivako chaiva chokuzvidzivirira ichidzivirira, izvozvo aisagona kunzvenga nehondo: dzavarwi yakanga yashatiswa kanoverengeka, asi rakavakwazve zvakare uye zvakare. Muzana remakore rechi19, Castle yakanga ikava Russian classicist yamambo, uye kuzvidzivirira ayo asara akanga atsakatiswa. nhasi, dombo pamadziro zvikuru yakashongedzwa masuo runopoteredza mumuzinda.
Pakati purani anokosha kuti ape Ternopil zvayo inimitable Kutarira, Dominican Church akakodzerwa chinokosha panotaurwa. Yakavakwa muzana remakore rechi18 mukupera Baroque manyorerwo, shongwe dzaro kwezvokufuka kupepuka kwenhau peguta. Pedyo chechi inomira reDominican mamongi 'zvipenyu nepedyo. Munguva Soviet, kereke kukava mufananidzo maberere; zviri kushingaira zvekare.
Asi kunyange sacral zvivako zvakawanda zvekare achiripo muna Ternopil. Mumwe yekare guta racho kwazvo decoration varipo ndiyo Chechi Rusimudzirwo of Cross, yakavakwa mukutanga kwezana remakore rechi16 riri munharaunda ane Kyivan Rus temberi yekare. Panguva iyoyo, raiwanzishandisirwa kudzivirira guta. Hazvina chete chivako mukuru Ternopil, asiwo zvikuru kujairika, sezvo kereke haana domes. Recently, chechi akazodzorerwa akatumidza “Church on Pond. "The Church wekare Dzokuberekwa, rakavakwa 1602, hakuna zvishoma zvinonakidza.
Asi kudanwa kadhi Ternopil ndiwo ayo 300-hectare manmade nyanza, riri mumwoyo peguta. Dziva iri rekare guta pachayo: zvakanzi akasikwa panguva iyoyo sezvo Castle. Parks nemapindu vakombe mudziva, uye yakakurumbira nezvekatsi iri kufamba nzvimbo vagari uye vaenzi zvakafanana.
Vazhinji akasiyana nenhoroondo, mapurani netsika varipo zvinogona kuwanikwa musi Ternopil raMwari nechokumucheto: anenge ose guta uye musha ose hamungandiurayi rine matongo vamwe Ages Castle, chechi yekare kana yemamongi. The Kremenets Castle uye Pochayiv Lavra ndivo zvikuru nevanhu dzakasiyana.
Ternopil iguta unodziya chaizvo uye kudzikama. Ndosaka vafambi dzakawanda pano kwete chete kuyemura zvayo zvinotyisa, asi kuti kunzwa kujairwa kudziya uye nomutsa tsiye guta rino zvinoshamisa.
Last update:24 Ndira 19